Isilika: Guqula idatha kunye neSpredishithi kwiiPapasho eziPapashiweyo | Martech Zone
Ngaba wakha waba nespredishithi esineqoqo elimangalisayo ledatha kwaye ufuna nje ukuyibona ngeso lengqondo-kodwa ukuvavanya nokwenza iitshathi ezakhelweyo ngaphakathi kwi-Excel kwakunzima kakhulu kwaye kuchitha ixesha? Ungathini xa ufuna ukongeza idatha, ukuyilawula, ukuyilayisha kunye nokwabelana ngezo mboniso?
Unako nge Silk. Isilika liqonga lokupapasha idatha.
Iisilika zinedatha kwisihloko esithile. Nabani na onokukhangela iSilk ukukhangela idatha kunye nokwenza iitshathi ezintle zonxibelelwano, iimephu kunye namaphepha ewebhu. Ukuza kuthi ga ngoku, izigidi zamaphepha eSilika ayenziwe.
Tyelela IiNethiwekhi zeNtlalontle eziPhambili ezili-15 Isilika yokujonga, yokwabelana okanye nokudibanisa ukubonwa okwenziwe kolu qokelelo lwedatha. Nantsi ishedyuli ephilayo yetshathi yebar yeenkcukacha zomsebenzisi:
Idata esuka eyona inkulu-social-networks.silk.co
Yenza amaxwebhu asebenzisane -Endaweni yokuthumela ii-PDF ezimileyo, iispredishithi okanye amakhonkco asuka kuGoogle amaXwebhu, sebenzisa iSilika ukwenza indawo enxibelelana ngokupheleleyo ebandakanya abasebenzisi kwaye ibakhuthaze ukuba badlale ngedatha yakho.
Shumeka idatha yokusebenzisana naphina -Thatha umbono wakho weSilk kwaye uwasebenzise kwiwebhu yonke. Bangenise kwiTumblr, kwiWordPress, nakwezinye iiplatifti ezininzi zokupapasha.
Yongeza iithegi ukwenza umsebenzi wakho uhlelwe ngohlobo, isitayile, okanye naluphi na udidi olukhethileyo. Ngokongeza idatha yendawo, unokwakha iimephu.
Ukubeka Silk ukusebenzisa, ndikhuphele ngaphandle uluhlu lwethu lwamagama aphambili Semrush kwaye ndakha ngokukhawuleza ukubonwa okundivumela ukuba ndihlelele ukujonga kunye nokujonga amagama aphambili apho bendinezikhundla eziphezulu kwaye bekukho itoni yevolumu yokukhangela… ngokusisiseko undazisa apho ukulungiswa kunye nokunyusa kunokuqhuba ukugcwala kwabantu abaninzi. Ndingakwenza oku ngokuhlela nokucoca idatha ... kodwa ukubonwa ngokuqinisekileyo kuyenze yacaca ngakumbi!
tags: idatha yokupapashaiqonga lokushicilela idathaUkwaziswa kwedathaiqonga lokuboniswa kwedathasilikaisilika
Iingcali zeMidiya yezeNtlalontle azinakuyiphatha iNyaniso